အိုင်းလိုင်နာ၏ ကွဲပြားခြားနားသော အမျိုးအစားများကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ?
Home Health & Beauty အိုင်းလိုင်နာ၏ ကွဲပြားခြားနားသော အမျိုးအစားများကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ?
Eye makeup ဟာ အမျိုးသမီးအများစု၏ အမြတ်နိုးဆုံး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Eye makeup လိမ်းတဲ့အခါ အိုင်းလိုင်နာက မျက်လုံးတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ အိုင်းလိုင်နာက အရည်၊ ခဲတံ၊ ဂျယ်လ်ပုံစံ စတဲ့ ကွဲပြားတဲ့ အမျိုးအစားတွေနဲ့ လာပါတယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေက ဒီကွဲပြားခြားနားတဲ့ အိုင်းလိုင်နာတွေကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာ မသိကြပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အိုင်းလိုင်နာ အမျိုးအစားများနှင့် ၎င်းတို့ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ (Liqiud Eyeliner) အရည်အိုင်းလိုင်နာ
အရည်အိုင်းလိုင်နာဟာ တိကျဖို့ လိုအပ်ပြီး လွယ်လွယ်ကူကူဆွဲလို့ရတဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူး ။လက်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဆွဲမှသာ ပြည့်စုံတဲ့ မျက်ဝန်းအလှကို ရရှိမှာပါ။ တကယ်လို့ လက်လှုပ်မိရင် ဘေးကိုချော်ထွက်ကုန်ပြီး ဆွဲဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရည်အိုင်းလိုင်နာ ဆွဲဖို့နည်းလမ်းလေးကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ပထမဆုံးအစမ်းအနေနဲ့ Stoke ကို သင့်မျက်ခွံ၏ အလယ်ကနေ စဆွဲပါ။ Winged အိုင်းလိုင်နာရဖို့ Stoke အနည်းငယ်ကို သင့်မျက်လုံးရဲ့ထောင့်အထိ ဆွဲပေးပါ။ အရည်အိုင်းလိုင်နာက သင့်ကို အဆင်မပြေဖြစ်လျှင် ခဲတံအိုင်းလိုင်နာနှင့် စဆွဲပေးတာက လုံးဝအဆင်ပြေစေမှာပါ။
၂။ (Pencil Eyeliner) ခဲတံ အိုင်းလိုင်နာ
ခဲတံ အိုင်းလိုင်နာက အိုင်းလိုင်နာစဆွဲတဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးရဲ့အစပ်(Waterline)ကို အရောင်ထည့်ဖို့အတွက် ခဲတံအိုင်းလိုင်နာနဲ့ ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ခဲတံအိုင်းလိုင်နာသည် အရောင်မျိုးစုံ ရှိပါတယ်။
၃။ (Gel Eyeliner) ဂျယ်လ်အိုင်းလိုင်နာ
သူတို့က ပုံမှန်အားဖြင့် ပုလင်းသေးသေးလေးနဲ့ လာပါတယ်။ သူတို့က ဘရပ်အသုံးပြုပြီး လိမ်းရတာပါ။ ဂျယ်လ်အိုင်းလိုင်နာက အလွန်လှပတဲ့အသွင်ကို ပေးပါတယ်။ ဂျယ်လ်ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက် ခြောက်သွေ့ဖို့ အချိန်ပေးရပါတယ်။
၄။ (Eyeshadow Eyeliner) အိုင်းရှဲဒိုး အိုင်းလိုင်းနာ
သင့်ရဲ့မျက်ခမ်းစပ်ကို အရောင်တင်တဲ့အခါ လိုင်နာကဲ့သို့ အိုင်းရှဲဒိုးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါက လှပတဲ့အသွင်ကို ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရောင်ခြယ်ဆေးသုံးဖို့ သင့်တော်တဲ့ ဘရပ်တစ်ခုကို သုံးရပါမယ်။
အိုငျးလိုငျနာ၏ ကှဲပွားခွားနားသော အမြိုးအစားမြားကို ဘယျလိုအသုံးပွုမလဲ?
Eye makeup ဟာ အမြိုးသမီးအမြားစု၏ အမွတျနိုးဆုံး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ Eye makeup လိမျးတဲ့အခါ အိုငျးလိုငျနာက မကျြလုံးတှကေို ပွတျပွတျသားသားနဲ့ ပျေါလှငျစပေါတယျ။ အိုငျးလိုငျနာက အရညျ၊ ခဲတံ၊ ဂယျြလျပုံစံ စတဲ့ ကှဲပွားတဲ့ အမြိုးအစားတှနေဲ့ လာပါတယျ။ တခြို့အမြိုးသမီးတှကေ ဒီကှဲပွားခွားနားတဲ့ အိုငျးလိုငျနာတှကေို ဘယျလိုသုံးရမလဲဆိုတာ မသိကွပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ကှဲပွားခွားနားတဲ့ အိုငျးလိုငျနာ အမြိုးအစားမြားနှငျ့ ၎င်းငျးတို့ကို ဘယျလိုသုံးရမလဲဆိုတာ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
၁။ (Liqiud Eyeliner) အရညျအိုငျးလိုငျနာ
အရညျအျိုငျးလိုငျနာဟာ တိကဖြို့ လိုအပျပွီး လှယျလှယျကူကူဆှဲလို့ရတဲ့ အရာမဟုတျပါဘူး ။လကျငွိမျငွိမျနဲ့ဆှဲမှသာ ပွညျ့စုံတဲ့ မကျြဝနျးအလှကို ရရှိမှာပါ။ တကယျလို့ လကျလှုပျမိရငျ ဘေးကိုခြျောထှကျကုနျပွီး ဆှဲဖို့ခကျခဲပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အရညျအိုငျးလိုငျနာ ဆှဲဖို့နညျးလမျးလေးကိုဖျောပွပေးထားပါတယျ။
ပထမဆုံးအစမျးအနနေဲ့ Stoke ကို သငျ့မကျြခှံ၏ အလယျကနေ စဆှဲပါ။ Winged အိုငျးလိုငျနာရဖို့ Stoke အနညျးငယျကို သငျ့မကျြလုံးရဲ့ထောငျ့အထိ ဆှဲပေးပါ။ အရညျအိုငျးလိုငျနာက သငျ့ကို အဆငျမပွဖွေဈလြှငျ ခဲတံအိုငျးလိုငျနာနှငျ့ စဆှဲပေးတာက လုံးဝအဆငျပွစေမှောပါ။
၂။ (Pencil Eyeliner) ခဲတံ အိုငျးလိုငျနာ
ခဲတံ အိုငျးလိုငျနာက အိုငျးလိုငျနာစဆှဲတဲ့သူတှအေတှကျ အကောငျးဆုံးဖွဈနိုငျပါတယျ။ မကျြလုံးရဲ့အစပျ(Waterline)ကို အရောငျထညျ့ဖို့အတှကျ ခဲတံအိုငျးလိုငျနာနဲ့ ဆှဲနိုငျပါတယျ။ ခဲတံအျိုငျးလိုငျနာသညျ အရောငျမြိုးစုံ ရှိပါတယျ။
၃။ (Gel Eyeliner) ဂယျြလျအိုငျးလိုငျနာ
သူတို့က ပုံမှနျအားဖွငျ့ ပုလငျးသေးသေးလေးနဲ့ လာပါတယျ။ သူတို့က ဘရပျအသုံးပွုပွီး လိမျးရတာပါ။ ဂယျြလျအိုငျးလိုငျနာက အလှနျလှပတဲ့အသှငျကို ပေးပါတယျ။ ဂယျြလျပုံစံဖွဈတဲ့အတှကျ ခွောကျသှဖေို့ အခြိနျပေးရပါတယျ။
၄။ (Eyeshadow Eyeliner) အိုငျးရှဲဒိုး အိုငျးလိုငျးနာ
သငျ့ရဲ့မကျြခမျးစပျကို အရောငျတငျတဲ့အခါ လိုငျနာကဲ့သို့ အိုငျးရှဲဒိုးကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ဒါက လှပတဲ့အသှငျကို ပေးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အရောငျခွယျဆေးသုံးဖို့ သငျ့တျောတဲ့ ဘရပျတဈခုကို သုံးရပါမယျ။
Next articleဘယ်သူမှလိုက်မမှီတဲ့ အမေတွေရဲ့အရည်အချင်းတချို့ကို ဖော်ပြနေတဲ့ပုံများ
Her Private Life ဒရမျမာကားမှာ နာမညျကွီး အဆိုတျော တဈယောကျအဖွဈ သရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ကောငျခြောခြောလေးကို မှတျမိကွမှာပါနျော။ သူ့ကို အမြားက 'ဝမျး'လို့သိကွပါတယျ။ Jung Jae Won ဆိုတဲ့ နာမညျအရငျးဖွငျ့ သရုပျဆောငျလောကကို...